Madaxweyne Xasan Sheekh: “Xaqdhowrka Madaxbannaanida Soomaaliya waa lama taabtaan” | Sahan radio
Madaxweyne Xasan Sheekh: “Xaqdhowrka Madaxbannaanida Soomaaliya waa lama taabtaan”
Madaxweynaha dowladda faderaalka Soomaaliya,Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horreeysay la hadlay wakiiladda beesha caalamka isagoo uga jawaabay warbixinno ka soo baxayay oo ay walaac uga muujiyeen khilaafka madaxda dowladda, iyagoo baaq ujeediyey mudaneyaasha Baarlamaanka in ay dhex-dhexaad noqdaan. War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Xassan Sheikh ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ‘’xaqdhowraan madax banaanida Soomaaliya’’
Muqdisho, 3 November 2014 – Aniga oo ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaan qirayaa dhammaan inta wakhti muhiim ah iyo hanti badan gelisay in ay Soomaaliya ku caawinto in ay gaarto guulaha muhiimka ah ee ku wajahan yoolka sare ee aan higsaneyno.
Labadii sano ee na dhaafay, iyada oo ay gacan ka geysteen dadweynaha Soomaaliyeed, Hey’adaha Federaalka, Baarlamaanka iyo beesha caalamku, Soomaaliya waxay ku tallaabsatay isbeddel weyn. Waxaan guul weyn ka gaarnay sii waditaanka isbeddelka annaga oo culeyska saarnay asaas-dhiga iyo u gogol xaaridda xasilinta dalka. Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, oo kaashanaya AMISOM, wuxuu hoos keenay maamulka Dowladda 80% dhulkii Shabaab haysateen.
Waxaa aaad noogu weyn filashada in horumarka la joogteeyo. Sidoo kale, waxaa nagu weyn in Soomaaliya loo daayo in ay horseed ka noqoto isbeddelkeeda. Markii ay Soomaaliya aqbalaysay in ay qayb ka ahaato heshiiska Hindisaha cusub, waxaan ku aqbalnay in uu ku saleysan yahay mabaaddii’da Iskaashiga ee ku cad Hindisaha Soomaaliya, kaas oo ay markhaati ka ahaayeen ayna ansixiyeen ka qeyb galayaashii Soomaaliya iyo kuwii Caalamiga ahaa ee ka wada qeyb galay Shirkii Brussels ee September 2013…..
Waxaan hadda ku baaqayaa in mabaaddii’daas la xaqdhowro. Waxaan ku baaqayaa in la dhowro Xuquuqda Soomaaliya ee madaxbannaanida isla markaana uu qeexayo Dasttuurka Federaalka ah ee ku meel gaarka ah, ee ku wajahan in ay mustaqbalkeeda iyadu go’aan ka gaarto, mustaqbal ay go’aaminayaan dadka Soomaaliyeed, Hey’adaha Federaalka iyo shuruucdeenna.
Waxaan mar kale u xaqiijinayaa shacabka Soomaaliyeed in Dowladda Federaalka ka go’an tahay Higsiga 2016, si loo xaqiijiyo in Dastuurka dib loo eego, la turxaan bixiyo, aftina lagu ansixiyo, in Federaalka la dhammaystiro iyo u diyaargarowga doorashada 2016 uu xowli ku socdo. Ma diidsanin in howl badan ay na sugeyaam, wakhtiga lagu fulin lahaana uu yar yahay. Si kasta oo xaaladdeennu u qallafsan tahay, wax qabasho la’aan, dhinaca ay doonto ha ahaatee, lama aqbali doono.